हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारहरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने !
हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने !
काठमाडौं, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होविन्द्र बोगटी तीन महिनाअघि प्रहरी प्रमुख भएर स्याङ्जा गएका थिए। गएको केही दिनपछि उनले ६० जना प्रहरी कर्मचारीलाई सा’मेल गराएर सोधे- तपाईंहरूमध्ये कति जनाले श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नुहुन्छ, हात उठाउनुहोस्। एकै जनाले हात उठाएनन्। बोगटी अहिले हरेक सामेलमा सोध्छन्- शतप्रतिशत प्रहरीले श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्छु भनेर हात उठाउँछन्। घरकी श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नु नभन्नुले प्रहरी कार्यालयको काममा के अर्थ राख्छ? प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले विस्तृत अ’र्थ्याउन खोजे।
बोगटीका अनुसार हरेक मानिसको दैनिकी सर्वप्रथम घरकै माहोलबाट च’लिरहेको हुन्छ। घरको वातावरणले कार्यालयको काममा सिधै अ’सर गर्छ। अझ चौबिसै घन्टा ड्यु’टीमा ख’टिने प्रहरी कर्मचारीका लागि त झन् घ’रायसी वातावरणको अ’सर महत्वपूर्ण नै छ ।किनकि , प्रहरी सडक, चोक, बजार, कार्यालय जता पनि जनतासँग ख’टिरहेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको दि’माग जतिबेलै ताजा हुनुपर्छ। ‘त्यो हुनका लागि घरायसी वातावरण ठीक हुनुपर्छ,’ बोगटी भन्छन्। बोगटीले एउटा घ’टना स्म’रण गरे। घ’टना स्वयम्भू वृत्तको हो।
बोगटी महानगरीय अ’पराध महाशाखा काठमाडौंमा थिए।गत जेठमा एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षकले आफ्नै पे’स्तोलले क’ञ्चटमा हा’नेर आ’त्म’ह’त्या गरे। त्यसको कारण पारिवारिक त’नाव थियो। ती अ’सईसँग शा’न्ति मि’सनका क्रममा बोगटीले हा’इटीमा सँगै काम गरेका थिए। ‘त्यस्तो इमानदार र लगनशील प्रहरीले आ’त्म’हत्’या गर्नुपर्ने कारण गहिरिएर हेर्दा आ’वेश, त’नाव र पारिवारिक क’लह देखियो,’ बोगटीले भने। अहिले पनि फौ’जी सं’गठनमा आ’त्म’ह’त्या’का घ’टना छँदैछन्। प्रहरीसाथै नेपाली सेनाका ज’वानले कहिलेकाहीँ आफूले बोकेको ह’तियार चलाएर आ’त्म’ह’त्या गरिरहेका छन्।
यस्ता घ’टना पा’रिवारिक बे’मेल र झ’गडाको कारण नि’म्तिएको बोगटीको बुझाइ छ। कतिपय फौ’जी सं’गठनका कर्मचारी परिवारमा त’नाव हुँदा डि’प्रेसनको सि’कार भइरहेका छन्। उनीहरू ड्यु’टी सकेपछि म’दिरा सेव’न गर्ने, बढी उत्तेजनामा आउने र अ’प्रिय क’दम चाल्ने गर्छन् । स्याङजा प्रहरी प्रमुख भएर पुगेपछि बोगटीले यस्ता घ’टना सम्झे र आफ्ना प्रहरी कर्मचारीको घ’रायसी वातावरण बनाउन अ’भियान नै च’लाउने नि’ष्कर्षमा पुगे। बोगटी अ’पराध अनुसन्धानमा द’ख्खल राख्ने प्रहरी अधिकृत हुन् ।उनले पारिवारिक क’लहका कारण घ’टेका थप्रै घ’टनाको अनुसन्धान गरेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो कुरा पहिले परिवार ठीक हुनुपर्छ, परिवार ठीक भयो भने हरेक काममा त्यसले सकारात्मक प्र’भाव ल्याउँछ।’ यसलाई उनले कार्यालयको का’र्यसम्पादनसँग जोडेका छन्। ‘घ’रासयी वातावरण राम्रो भयो भने उच्च का’र्यसम्पादन हुन्छ, त’नाव व्यवस्थापन पनि हुने भयो,’ बोगटीले भने, ‘त्यसैले, मैले हरेक दिन हरेक प्रहरी कर्मचारीले श्रीमतीसाथै छोराछोरीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्न लगाएँ।’ बोगटीले आफू गएपछि स्याङजा प्रहरीमा यो अ’भियान थालेका थिए। अहिले हरेक प्रहरी कर्मचारीले आफ्नी श्रीमतीलाई बेलुका ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्छ।
प्रहरी कर्मचारीले श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्छन्/भन्दैनन् भनी जाँ’चबुझ गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीलाई फो’कल प’र्सन नै तो’किएको छ। उनले हरेक प्रहरीका श्रीमती र छोराछोरीको नम्बर राखेका छन्। उनले दिनहुँ ‘फ’लोअप’ गरिरहेका हुन्छन्। भने-नभनेको, कार्यालयबाट बि’दा लिएर घर पुगे नपुगेको, घरमा पुगेपछि कस्तो वातावरण भयो लगायत अनेकथरी ग’तिविधिबारे अधिकारीले घरमा सोध्छन्।‘एक त यो चाहिँ मेरो ड्यु’टी नै हो भन्ने पनि परेको छ, अर्को परिवारमा नयाँ खालको उ’त्साह पनि आएको छ,’ बोगटी भन्छन्। सुरू-सुरूमा श्रीमानले ‘आइ लभ यू’ भन्दा श्रीमतीहरूले जि’स्क्याएको जस्तो ठा’नेछन्।
पछिपछि चाहिँ श्रीमानले माया गर्न थाल्यो भनेर खुसी हुन थालेको बोगटीले बताए। ‘भाडामा बसेको छ भने भाडा तिरे नतिरेको, छोराछोरीको स्कुलको फी बु’झाए-नबुझाएको लगायत परिवारप्रति जि’म्मेवारी निभाए-ननिभाएको फ’लो गर्छौं,’ बोगटीले भने, ‘यो अ’भियानपछि प्रहरी कर्मचारी परिवारसाथै कार्यालयमा त’नावरहित ढंगले काम गरेको पाएँ।’ कार्यालयमा उनले फ्री वाइफाइ राखेका छन्। प्रहरी कर्मचारीहरूले घरमा सधैं मेसेन्जर, भा’इबर, इ’मो, ह्वा’ट्स एप लगायतबाट सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन्। ‘दिनहुँ, घर टाढा छ भने पनि श्रीमान् मसँग नजिक छ भन्ने श्रीमतीले पनि अनुभूति गर्न पाइन्,’ बोगटीले भने।
समाजमा अनेक वि’कृति छन्। श्रीमानको माया नपाएपछि बि’रक्तिएर श्रीमतीले घरबार ल’थालिंग पारेका घ’टना पनि छन्। ‘श्रीमानले माया गर्न छो’ड्दा श्रीमतीले अर्कैको माया पाउने र त्यसले परिवारमा झन् स’मस्या पैदा गर्ने हुन्छ,’ बोगटीले भने। स्याङ्जामा पाँच सय जना प्रहरी छन्। यी सबै प्रहरीको दैनिक ग’तिविधि नि’याल्न डिएसपी अधिकारीलाई धौ-धौ नै परिरहेको बोगटीले बताए। बोगटीका अनुसार आत्महत्या बढी हुने जिल्लामा स्याङ्जा पाँच नम्बरमा छ। यहाँ बिहे भएको दुई महिनामै श्रीमती-श्रीमानबीच झ’गडा भएर आ’त्म’ह’त्या नि’म्तिएका घ’टना छन्।
‘मैले प्रहरीबाट यो अ’भियान सुरू गर्दा समाजमा पनि स’कारात्मक सन्देश गई आ’त्म’ह’त्या नियन्त्रण होस्,’ बोगटीले भने, ‘समाजको सु’रक्षा गर्ने प्रहरीबाट यो सन्देश फै’लिन जरुरी छ।’ प्रहरीमा बि’दा नपाएको, घर जान नपाएको गु’नासो व्याप्त छन् ।तिनले पनि का’र्यसम्पादनमा असर गरिरहेको बोगटीले बताए। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले बि’दाको सन्दर्भलाई लिएर आउने गु’नासो सम्बोधन गर्न निर्देशन नै दिएका छन्।‘आइजीसाबको कार्ययोजना र प्राथमिकतामा बि’दा पनि छ, त्यसैले मैले बिदालाई आलोपालो माध्यमद्वारा व्यवस्थापन गरी प्रहरीमा तनावको वातावरण ह’टाउने प्रयन्त गरेको छु,’ बोगटीले भने।